Shina:Fandalinana momba ny fitiavan-tanindrazana · Global Voices teny Malagasy
Shina:Fandalinana momba ny fitiavan-tanindrazana
Voadika ny 09 Mey 2008 8:45 GMT
Nony manakaiky an'i Shina ny fampitana ny Afo Olaimpika dia hitan'i Mo Yang hoe nisy fiantraikany tamin'i Shina ny “fiarovana” ny fampitapitana ny afo nataon'ireo Sinoa mpila ravinahitra any ivelany.
Ity fampitana ny afo nanerana ny tany ity dia nosembantsembanin'ireo Sinoa mpila ravinahitra “tia tanindrazana”. Tany am-piandohana, raha nitety an'i Londona sy Parisy ny afo, dia efa nandraman'ireo olona manohana an'i Tibet nalaina mba hampiatoana ny fampitana azy. Tamin'io fotoana io, tsy manana fialan-tsiny momba ny fihetsiny mihitsy ireo olona ireo. […] Raha nahay nitony isika, nifandamina, […] ka namela ny fampitana hizotra amin'ny tokony ho izy – namela ny mpitandro filaminana tamin'ireo firenen-kafa handray ny andraikitra momba ireny olona tsy nankasitraka ireny sy izay filazany, ” dia izao, ho afaka hahita Sina tena vonona hikarakara Lalao Olaimpika misongadina isika, ary tsy hanafangaro ny atletisma sy ny politika . […] Na izany aza, niseho avy tamin'ny tsy fantatra ireo sinoa tia tanindrazana avy @ tany hafa , […] ary nampijotso ny fahitana ny endrik'i Shina.
Wan-Er-Bu-Liou-Mang-Gan-Ga no mitondra fanadihadiana momba izay tena mahatezitra ireo “tia tanindrazana”:
Nahoana ny zava-niseho tao anatin'ny andro vitsivitsy no nahatezitra Sinoa maro? Izao, nahatezitra anay ny zava-niseho. Na izany aza, mahita aho fa mandeha an-jambany ihany ilay hatezerana, …. Etsy ankilany, ny hatezerana dia mirona fotsiny amin'ireo zava-niseho fa tsy misaina velively ny ho fahasarotan-javatra aorian'ireny seho ireny. Mamela ahy hilaza tsotra hoe: Ny fahatsapantsika momba an'i Shina dia mirindra, ary isika koa mihevitra fa manana fijery tsara momba antsika ny any ivelany. Rehefa nitranga ireny zavatra ireny dia tsy tsara araka izay niheverantsika azy ny fahitantsika ny zavatra rehetra , ary io fifanoherana io no vao maika koa nanamafy ny hatezerantsika.
Andaniny indray, i Hua-Bin Jing no manatsafa raha tena fitiavan-tanindrazana tokoa ny fanaovana ireny ankivy ireny, tsy ny rehetra angamba no ho ao anatin'izay karazana tia tanindrazana izay:
Ny olona sasany milaza fa: ‘ raha misy olona iray manome vola ho an'ny Lalao Olaimpika ka mampitaha ny fanaovana ankivy tamin'ireo Lalao Olaimpika tany amin'ny firenen-kafa, ahoana no hilazantsika fa tsy tia tanindrazana io olona io? Hilaza koa ve ianao fa ireo olona toa tsy miraika dia tia tanindrazana ?’
Raha izay no famaritantsika ny hoe tia tanindrazana, dia ireo olona mpanao kolikoly no mbola tia tanindrazana lavitra noho isika, ireo voaraoka. Tsy manana hatolotra isika, ary tsy manana fotoana koa mba handraisana anjara. Nanarama olona miasa eo amin'ny sehatry ny vola ny governemanta raha toa izy ireny mirotsaka amin'ireny fihetseham-panoherana ireny, fa isika kosa tsy mahalala akory hoe iza no hanarama antsika amin'ireny hetsika ireny.
Olona mpanao kolikoly dia midika hoe olona mandray kolikoly ao anatin'ny governemanta ary eo amin'ny fiainany manokana. Manodinkodina ny volan'ny firenentsika izy ireo, izay fananam-bahoaka.
Isika rehetra dia samy zanakalahy sy zanakavavin'ny firenentsika daholo, nefa tsy mitovy ny fitondra antsika tsirairay. Jereo ireo sanga (élite): […] ny karaman-dry zareo dia mihoatra ny enimpolo tapitrisa RMB. Izany eo ihany, ny salan-karamantsika dia ambanin'ny 1/6000 amin'ny azy ireo. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, ny taona iray ho azy ireo dia 6000 taona ho an'ny sarambabem-bahoaka. Tena tia azy ireo tokoa ny firenentsika, koa nahoana no tsy itiavan'izy ireo ity firenena ity?. Tsy tonga sangany fotsiny noho ny fifanintsanana izy ireo. […] Angamba ny fahaiza-manao anananao mbola tsara lavitra noho ny azy ireo, saingy omen'ny firenena tombom-pitia ihany izy ireo. Ka inona no azonao atao?
Vokany, lovaina ny fitiavan-tanindrazana. Isika tsy manana anton'asa dia tsy ho lasa tia tanindrazana izany, ary ny tarana-tsika koa tsy ho tonga amin'izany ihany koa. Jereo ny zanatsika, tena mbola kely dia efa miasa satria tsy manambola handehanana mianatra, na miaina zava-mafy noho ny trosa.
Da-Da De-You dia manolotra soso-kevitra momba ny hamaritana ny zava-kinendrin'ny fitiavan-tanindrazana,
Raha ny maha ao anaty foko iray no zava-kendrena – na fijery fototra koltoraly, dia tsy olona tia tanindrazana ireny mpanao kolikoly ireny. Ny tokony ho izy aza, mpivarotra ny tanindrazantsika ry zareo. Raha ny governemanta no kendrena, ny antoko eo amin'ny fitondrana, mazava ho azy, dia ry zareo no tena tia tanindrazana, satria io governemanta io dia manome vahana azy ireo hanao kolikoly.
Feng-Yen-Feng-You dia manondro ireo mpila ravinahitra “tia tanindrazana” any ivelany ho mpamadika:
Ireny mpila ravinahitra “tia tanindrazana” any ivelany ireny dia nivatravatra fiteny. […] Raha tena tia marina ny firenentsika izy ireo, tokony handa ny maha-vahiny azy, handrovitra ny karatra maitsony (green cards), ary miverina aty Shina. Raha takarina amin'izay lazainy ho fitiavany tanindrazana, maro amin'izy ireo no mpamadika ny firenena roa tonta: mamadika ny firenena nahaterahany izy amin'ny fipetrahany any amin'ny firenena izay mijery azy ho toy ny “fahavalo”, ary mamadika ireny firenena ireny indray amin'ny filazany fa tarank'ireo “fahavalon” ireny firenena ireny ry zareo.
Touch123456 koa dia milaza izay heveriny fa tokony hotaon'ny tia tanindrazana,
Manohitra ny kolikoly no tokony hataon'ny tia tanindrazana, satria mitsetsitra ny rantsika izy ireny.
You-Ren Li milaza fa ny lalana marina mankany amin'ny fitiavan-tanindrazana dia ny fandinihana ny tantara sy fitadiavana fomba hananganana firenena vao.
Amin'ny maha-tanora tia tanindrazana, ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny mandalina ny tantaran'ity firenena ity raha tena te hahafantatra marina ny maha tia tanindrazana isika. […] Rehefa haintsika ny tantara, haintsika izay tena ilaintsika hatao marina ho an'ity firenena ity. […] Ny fomba mahazatra amin'ny May Fourth Movement dia tsy ny mandrava fa ny mamorona rehefa avy nandinika fatratra. Amin'ny fanehoana ny tantara sy ny fomba fanao, dia afaka manangana firenena vao isika, amin'ny lafiny toe-karena, lafiny ara-drafitra, kolotsaina, teknolojika ary ny maha olona.